ADB Announces 2017-2021 Strategy for Improvement of Myanmar’s Economy
The Asian Development Bank (ADB) has announcedanew medium-term country partnership strategy (CPS) for Myanmar to help support the government’s aim to boost economic growth and job creation. ADB said the 2017-2021 strategy will focus on strengthening access to and connectivity with rural and urban areas, linking with regional and global markets and buildingaskilled workforce and increasing employment opportunities and promoting reforms that will help to modernize the economy. “ADB’...
DICA’s FDI Report reveals Singapore as Biggest Investor in Myanmar
Investment from Singapore has taken the biggest share of foreign investment flow into Myanmar over the one year period following the election of the NLDled government, according to the Directorate of Investment and Company Administration (DICA).Investment-related statistics from the DICA states that Myanmar attractedatotal foreign investment value of $6.64 billion over the 2016-2017 financial year. Singapore was the top investor witha$3 billion investment sum, followed by Vietnam with over $...
Myanmar Automated Customs Clearance System Coming to Myawaddy Trading Zone in 2018
Myanmar customs officials expect to launch the internationalized Myanmar Automated Customs Clearance System (MACCS) at the Myawaddy Trading Zone located on Myanmar-Thai border in March 2018, according to Win Thant, director at the Customs Department.Win Thant told the Seminar on MACCS Review & Resolution of the Private Users held at the office of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry that works were underway at the Myawaddy Trading Zone to set up the MACCS,at...
Trade Deficit Continues to Mar Export-led Growth Vision
Myanmar continues to sufferatrade deficit according to the figures reported by the Central Statistical Organisation of the country for the 2016-2017 financial year that ended on March 31. The nation’s trade gap value reached more than $5 billion during the period, which is roughly the same amount compared to the year earlier. Up to the final week of March 2017, the external trade value totalled at more than $28 billion for the 2016-2017 financial year, with export value hitting $11.62 billion...
Singaporean Firm Launches Venture Capital Fund for Myanmar Tech
စင်ကာပူအခြေစိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Vulpes ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံမှုလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သောအပတ်က ပြောကြားသည်။ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်ကို VIMIC ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီအစဉ်အရ ငယ်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသေ...
FDI Tops $1bn in Less Than Two Months – Myanmar on Course to Meet Yearly Target
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည် ဧပြီလတစ်လတာအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅၆သန်းရှိခဲ့ပြီး ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အစပိုင်း နှစ်လတာကာလအတွင်း စုစုပေါင်းပမာဏကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ်အတွက် မျှော်မှန်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏဖြစ်သည့် ကန်ဒေါ်လာခြောက်ဘီလီယံကို ပြည့်မီဖွယ်ရှိကြောင်း သိရ သည်။အဆိုပါနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ လျာထားချက် ပြည့်မီရန်အတွက် နှစ်လလျှင် အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ဘီလီယံရရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိပမာဏသည် ကုမ္ပဏီများက တင်ပြလာသည့် စီမံကိန်း တန်ဖိုးအပေါ်...
Myint& Associates Offshore Supply Base Ltd (M&AOSB) သည် ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ကွက်များ အတွက် ကမ်းလွန်ထောက်ပံ့ရေးအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ငရုတ်ကောင်းမြို့နယ်ခွဲရှိ ကုမ္ပဏီပိုင်မြေဧက၃၀မှာတည်ဆောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က မေ၂၀ရက်မှာ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကမ်းလွန်ထောက်ပံ့ရေးအခြေစိုက်စခန်း(ငရုတ်ကောင်း) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ကာလ နှစ်၃၀ရရှိပြီဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ကျပ်၅၀ဘီလီယံခန...
The Tokyo-headquartered photography and imaging company first created its subsidiary, Fujifilm Myanmar Investment Limited, as an import and wholesale company in Thilawa SEZ last August.According to Kenji Sukeno, president of Fujifilm Holdings, that subsidiary will now focus on the import, distribution and sales of products related to photography, printing and medical uses in Myanmar. Operations began in April 2017.“The new company is equipped withadistribution warehouse and is capable of direc...
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်နှင့် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Euromoney Institutional Investor (Asia) တို့ ပူးပေါင်း၍ Myanmar Global Investment Forum ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ (Myanmar International Convention Center –MICC 2) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများမှ ညွှန်ကြားရေး...
International tourists are entering by cruises along Chindwin River
The international tourists are continuously entering and visiting in and out of Myanmar through international gateways and cross- border gateways in order to enjoy and observe Myanmar’s natural beauties of landscapes, sceneries, tourist’ attractions various kinds of traditions and customs and social lifestyles .In their visit, tourists have been continuously entering into Myanmar not only from border gates but also from international land, air and water transportation.With the supervision of Min...
The domestic gold market is unstable, with the gold price fluctuating in the global market, said U Kyaw Win, the secretary of Myanmar Gold Entrepreneurs Association.“The main reason for the increasing price in the domestic gold market is the high global price, plus the high dollar exchange rate”, U Kyaw Win said. “After North Korea firedamissile over Japan last month, the New York gold price soared. The gold price is unstable this year, but it is still on the rise”.The gold price reached its h...
Thai investors are confident in Myanmar’s economy
Thai business and investors expressed full confidence in Myanmar’s economic potential and future progress.At the recent Myanmar Insight 2017 held in Bangkok, senior Thai and Myanmar officials joined leading businessmen and investors to exchange views on prospects of investing in Myanmar.The seminar was organised by the Thai Embassy in Yangon to build network and matching between potential Thai and Myanmar investors.In his key-note speech, Deputy Foreign Minister Virasak Footrakul reiterated that...
Myanmar’s trade deficit has widened on the back of fluctuations in commodity prices, illegal trade andaweaker currency.In 2016-17, the trade deficit amounted to over US$5.5 billion, up from US$5.4 billion in 2015-16 and US$4.9 billion in 2014-15, according to the statistics released by the Central Statistical Organisation.Among the country’s imports is diesel. Between September 17 and September 23, Myanmar imported over 64,000 tonnes of diesel worth US$32 million by sea, representing an increa...
Myanmar’s trade with EU hit over US$ 1billion in first five months of this FY
MYANMAR’S trade with members of European Un-ion over past five months in current FY amounted to over US$1 billion, com-prising $665 million worth of export and $362 million worth of import, according to the statistics released by the Ministry of Commerce last Friday.Since April, Germany was ranked first among EU countries having the largest trade value of $254 million with Myanmar, followed by Britain at the second place with about $145 million. France was listed at the third place with tra...
Silk Air to fly more Singapore-Yangon flights instead of Scoot
SINGAPOREAN Silk air will take over flights to Yangon as Singa-pore Airline Group (SIA) budget airline Scoot will no longer fly to Yangon starting from 29 October, according toareport of Myawady Daily, yesterday. At present, Scoot flies to Yangon five timesaweek. Silk Air under SIA group is current-ly operating 10 flightsaweek to Yangon and3flightsaweek to Mandalay. Silk air will increase its Yangon’s flight times to 15aweek. Silk Air will control over Scoot’s Yangon flight...
Floods cause destruction of betel farms, doubles the price
THE price of betel leaf has doubled after floods destroyed betel farms in Kyaiklat Town-ship in Ayeyawady Region, ac-cording to yesterday’s report of City News. Floods inundated betel farms in some villages of Kyaiklat Township in June and July. The destruction of betel farms quickly led to unusually high prices. Betel leaf did not fetchagood price shortly after betel farm owners plucked the leaves early as an immediate response to flood. At present, tahe price has soared. The b...
China company to invest $390 million to Mandalay-Myotha Industrial Park
A company from China will soon start operations on 50 acres of land at Myotha Indus-trial Park in Ngazun Township, Mandalay Region with capital of US$390 million.The company was set up under the name Mandalay Ba-oshan Myotha Industrial De-velopment Co. in December 2016. With approval of the My-anmar Investment Commission in June, first phase activities will be carried out on 50 acres by 2018, including factories, storage=, staff apartments and office buildings, officials said.Mandalay Region gov...
Customs seizures at Myanmar ports of entry worth Ks4.8 billion in October
NAUTHORIZED goods worth more than Ks4.8 billion were seized by Myanmar customs last month, according to the official figures released by the Customs Department. In October, the customs department confiscatedawide range of illegal goods with an estimated value of Ks4.817 bil-lion at all customs checkpoints including Yangon International Airport, Yangon port and jetties, Yepu and Mayangyaung check points and other significant points in regions and states, recording more than 456 cas-es. Se...
ရန်ကုန်မြို့တွင် လေပြင်းကျ၊ နေရာကွက် မိုးကြီး၍ ရေနစ်မြုပ်ပြီး ယာဉ်အချို့ပျက်စီး
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဧပြီ ၃ ရက် နေ့လယ်က ရုတ်တရက် လေပြင်းကျခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်း တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးခဲ့သော ကြောင့် နာရီပိုင်းအကြာ ရေကြီး နစ်မြုပ်မှု၊ ယာဉ်အချို့ပျက်စီးမှု နှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည်။နေ့လယ် ၃ နာရီခန့်ကစတင် ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်အ များစုတွင် မိုးရောလေပြင်းပါတစ် ပြိုင်နက် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။‘‘ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်ကိုမေးကြည့်တာ ဘာမှမ တက်သေးဘူး။ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်မှာတော့ သစ်ပင်ကျိုးတာ၊ ဓာတ်တိုင်ကျိုးတာ၊ ဆိုင်းဘုတ် ပြုတ်ကျပြီး အာရာဖတ်အပေါ် ပြုတ်ကျနေတာတွေတော့ြ...
ပြည်တွင်းက လက်ကျန်ကြိုးတံတား ၂၉ စင်း စိုးရိမ်စရာမရှိဟုဆို
မြောင်းမြကြိုးတံတားပြတ်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ကြိုးတံတား ၂၉ စင်က စိတ်ချရတဲ့အနေအထားရှိပြီး အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြောင်းမြကြိုးတံတားပြတ်ကျမှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အခုလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတွင်းရှိ ကြိုးတံတားတွေ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ကြိုးပြတ်ကျခဲ...
သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ မဖြစ်ပွားအောင် အခုလိုစီစဉ်နေတာပါ။လာမယ့် သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ တရားမဝင်အဝေးပြေးကားလက်မှတ်ရောင်းချတာတွေနဲ့ ကြားကားတွေ ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲတာတွေမလုပ်အောင် စစ်ဆေးကြပ်မတ်နေတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီး ကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ကနေ သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ ခရီးသွားတွေကို ဂိတ်အပိုင်မရှိသူတချို့က အဝေးပြေးကားလက်မှတ် အရောင်းကောင်တာတွေ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပြီး နောက်ငွေလိမ်လည်မှုတွေရှိခဲ့လို့ ဒီနှစ်မှာတော့ အဲဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့...
Appleသည် iPhone 8နှင့် iPhone 8 Plus စမတ်ဖုန်းများအတွက် အနီရောင် မူကွဲဗားရှင်းကို မိတ်ဆက် ပြသလိုက်သည်။အဆိုပါ ဖုန်းများ ထုတ်လုပ်မှုသည် အမေရိကန် နည်းပညာ လုပ်ငန်းစုကြီးနှင့် ပရဟိတ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ REDတို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ REDသည် အာဖရိက နိုင်ငံများတွင် HIVနှင့် AIDS ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကူညီ ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။iPhone 8နှင့် iPhone 8 Plusတို့၏ RED မူကွဲ ဗားရှင်းများတွင် တောက်ပသည့် အနီရောင် အလျူမီနီယမ်သား ကိုယ်ထည်ကို အသုံးပြုထားသည်...
မန္တလေးမြို့ရှိ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်အနေကဇာတင် အ ခမ်းအနားကို ဧပြီ ၂၂ ရက်က သံဃာအပါး ၁,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ပင့်သံဃာ ၁,၀၈၀ ပါးအား မဟာမုနိဘုရားစောင်းတန်းလေး သွယ်နေရာသို့ ပင့်ဆောင်ကာ နံနက် ၇ နာရီကစတင်၍ အနေက ဇာတင် အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ သည်။‘‘ကျွန်တော်တို့ဂေါပကဖြစ် လာပြီး ဘုရားနဖူးတော်မှာ ရွှေချ ထားတာတွေကို ပြန်ခွာပြီးမျက်နှာ တော်ကို ပြန်လည်ကြည်ညိုနိုင် အောင် ရောင်တော်ဖွင့်တယ်။ ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ အဆင့် မြင့်မီးပူဇော်တာတွေ၊ ဘုရားပလ္လင် တော်ရွှေအသစ်ပြန်ချတာတွေ၊ နောက်ပြီး ကျောင်းတော်ကြီးကို ရွှေပြ...
ရန်ကုန်မြို့က ပထမဆုံး တိရစ္ဆာန်သင်္ချိုင်း
ရန်ကုန်က သန်လျင်မှာတိရစ္ဆာန်တွေအတွက် သချုင်္ိင်းရှိနေတယ်ဆိုတာ တကယ်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖြစ်စေချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီတိရစ္ဆာန်သချိင်္ုင်းကသူတို့သခင်တွေရဲ့ ကောင်းမွန်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတိရစ္တာန်သချိင်္ုင်းကို အစိုးရက ဖော်ဆောင်ထားတာမဟုတ်သလို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ကမကထပြုထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တိရစ္ဆာန်ချစ်သူတစ်ဦးက သူရဲ့ ခွေးလေးသေဆုံးတာကို လာမြှုပ်ရာကနေ နောက်ပိုင်းတစ်စတစ်စ လူသိများလာပြီး တိရစ္ဆာန်သချိင်္ုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။...
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ကနေ ရွှေ့လျားလာတဲ့ လေပွေလှိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တချို့မှာ နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ဧပြီလ ၂၆ ရက်ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း နေရာကျဲက...
Duwun ကပြုလုပ်တဲ့ အစားအသောက်လုပ်ငန်းနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ
Duwun ကပြုလုပ်တဲ့ အစားအသောက်လုပ်ငန်းနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲDuwun ကပြုလုပ်တဲ့ အစားအသောက်လုပ်ငန်းနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တည်ထောင်ချင်သူတွေ၊ နောက်ပြီး အများနဲ့ မတူဘဲ နည်းလမ်းသစ်တွေ နဲ့ ထိုးဖောက်လိုသူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီ ဆွေးနွေးပွဲက အစားအသောက်လုပ်ငန်းနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေလာရောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။“ ကျွန်ေ...
F8 2018 ညီလာခံမှာ ကြေညာသွားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုငါးခု
မေလ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ F8 2018 Developer ညီလာခံမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာ ယခုနှစ်အတွက် အရေးပါတဲ့ အပြောင်းအလဲ အစီအစဉ်အချို့ကို အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာကြီးရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဇူကာဘက်မာ့ခ်ကိုယ်တိုင် ဒီညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ခရီးဆက်မယ့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း အသစ်တွေထဲမှာ အရေးပါတဲ့၊ အဓိကသိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာငါးခုကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။(၁)Oculus Go စရောင်းမယ့်နေ့မေလဆန်းကစပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ VR အထောက်...
လေးလအတွင်း မီးဘေးကြောင့် ကျပ်သန်းသုံးထောင်ကျော်ဖိုးဆုံးရှုံး
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဧပြီ အထိ လေးလအတွင်း နိုင်ငံတစ် ဝန်း မီးလောင်မှု ၈၅၁ ကြိမ်ဖြစ်ပွား ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျပ် သန်း ၃,၃၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေကပြောသည်။‘‘ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ နိုင်ငံ တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အ ဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်’’ ဟုမရမ်းကုန်းမြို့နယ် အုတ်ပုံဆိပ် လမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ် ဖွဲ့ဌာနချုပ်၌ ယမန်နေ့က ကျင်းပ သည့် (၇၂)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ နိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နေ့အခမ်း အနားတွင် ၎င်းကပြောသည်။၂၀၁၆ တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း မီးလောင်မှု ၁,၈၄၇ ကြိမ်ဖြစ်ပ...
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရန် ၂၂ မြို့နယ်တွင် အချိန်ပိုင်းမီးပြတ်မည်
မိုးဦးကာလ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆောင် ရွက်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းရှိ မြို့နယ် ၂၂ ခုတွင် အချိန်ပိုင်း မီးပြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (YESC)က မေလ ၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် မလွတ် ကင်းသော သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်း ခုတ်ခြင်းနှင့် ဟောင်းနွမ်းဓာတ် ကြိုးများကို လျှပ်ကာပါ ဓာတ်ကြိုး အသစ်များဖြင့် လဲလှယ် မည်ဖြစ် ကြောင်း မေလ ၈ ရက် နှင့် ၁၀ ရက်တွင် နံနက် ၉ နာရီမှ မွန်း တည့် ၁၂ နာရီအထိ မြို့နယ် ၂၂ ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီ ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကော်ပိုရေ...
Google I/O 2018 ကွန်ဖရင့်ရဲ့ ကြေငြာချက်တွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက လူဆန်လာတဲ့ Google Assistant ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အသံစနစ်ပိုင်း အထူးအဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ Google Assistant သစ်ကို ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံပေင်း ၈၀ ဆီ ဖြန့် ချိသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ "ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ Assistant ကို ဘာသာစကား ၃၀ နဲ့ ပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကို ဖြန့် ချိသွားမှာပါ" လို့ Google Assistant ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဌာန ဒုဥက္ကဌ စကော့ဟက်ဖ်မန်းက I/O 2018 ပ...
ကျောင်းကားတွေကို ကြီးကြပ်ဖို့ အမျိုးသမီးတွေကို ခေါ်ယူ
ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပြေးဆွဲမယ့် ကျောင်းကားတွေအတွက် ယာဉ်မောင်းနဲ့ အမျိူးသမီးယာဉ်ကြီးကြပ်တွေကို ခေါ်ယူနေတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီး ကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လမှာ စတင်မယ့် ပညာသင်နှစ်မှာ အသုံးပြုမယ့် ကျောင်းကားစနစ်သစ်အတွက် ရည်ရွယ်ခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီး ကြိုတင်စုဆောင်း ခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ယာဉ်မောင်းနဲ့ အမျိူးသမီးယာဉ်ကြီးကြပ်တွေအဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေအနေနဲ့ အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း သတ္တမတန်း အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပြီး ယာဉ်မောင်းက အသက်၃၀ နှစ်ကနေ ၅၅ နှစ်အတ...
မြန်မာ-တရုတ် ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်စေရန် ကုန်စည်ပြပွဲ ပြုလုပ်မည်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများကို မြန်မာကုမ္ပဏီများ ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝကို ပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် China-Myanmar (Yangon) ကုန်စည်ပြပွဲကို မေ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ Myanmar Event Park တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ပြပွဲတွင် ပြခန်းပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်ပါဝင်ပြီး ကုမ္ပဏီေ ပါင်း ၁၀ဝ ကျော်က ပါဝင်ပြသသွားမည်ဟု သိရသည်။ပြပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မီးအလင်းပေးရန်သုံးသည့်ပ...
တက္ကသိုလ် ၁၁ ခု၏ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လက်ခံသည့် စနစ်ကို ၂၀၁၈ကစတင်၍ပြောင်းလဲမည်ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မန္တ လေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်နည်း ပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးနည်း ပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးနိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ်တို့၏၀င်ခွင်...
မေလ ၁၉ ရက်မနက်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုဒ်က ဓာတ်လှေကားတစ်စင်း စက်ချို့ယွင်းပြီး ဓာတ်လှေကားပေါ်ပါလာသူ ဘုရားဖူး ၁၆ ဦးက အချိန်တစ်နာရီကျော် ပိတ်မိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ကလေးငယ်နှစ်ဦး ၊ကျား ငါး ဦး ၊ မ ကိုးဦးတို့ ပါဝင်စီးနင်းလာတဲ့ အရှေ့ဘက်မုဒ်က အတက်ဓာတ်လှေကားချို့ယွင်းတာကြောင့် ရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီ ကျော်အကြာမှာ ဓာတ်လှေကားအပေါ်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ပိတ်မိနေသူတွေကို ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကို ရွှေတိဂုံဘုရားတာဝန်ရှိသူတွေ ၊လုံခြုံရေးတွေ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခက်ခဲစွာ ကယ်ဆယ်ခဲ...
ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ် ဟိုတယ် မီးသင့်အဆောက်အအုံ များကို ယခုလ နောက်ဆုံးပတ် အတွင်းဖြို၍ အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထူးကုမ္ပဏီ လက်ထောက်မန်နေ ဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမြတ်မင်းဇင်က ပြောသည်။မီးသင့်အဆောက်အအုံကို ဖြိုရန် ကန်ထရိုက်အပ်ထားပြီး လုပ်ငန်း ကာလမှာ တစ်လမှ တစ်လခွဲအထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။‘‘အဆောက်အအုံသစ် ပြန် လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် မီးသင့်အဆောက်အအုံဟောင်းကို အရင်ဖြိုရမှာပါ။ ပြီးရင် အဆောက်အအုံသစ်ဒီဇိုင်းနဲ့ မြေပြင်အနေအ ထား ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ အင်ဂျင် နီယာတွေ စစ်ဆေးမှာပါ။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပ...
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို မုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ဒေသရှစ်ခုမှာ နေရာကွက်မိုးကြီးမယ်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းကို ၀င်ရောက်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကို ၀င်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ မုတ်သုံလေအား အသင့်အတင့် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအရှိန်ကြောင့် နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ရန်က...
သီလဝါတွင် အရှည် မီတာ ၁,၀၀၀ ရှိသည့် ဆိပ်ကမ်းကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးငွေဖြင့် တည် ဆောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပို့ ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဝင်းခန့်က ပြောသည်။ယင်းဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိပ် ကမ်းလုပ်ကွက်ငါးခုပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ ပိုင်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအဖြစ် တည် ဆောက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်သဘော တူထားကြောင်း၊ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်စည်များကို ပိုမိုကိုင်တွယ်နိုင် ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။‘‘ဒီဆိပ်ကမ်းလုပ်ကွက်ငါးခု စလုံးပြီးမယ်ဆိုရင် ကုန်သေတ္တာ တစ်သန်းလောက်အထိ ကိုင် တွယ်ဖို့ မျှော်မှန်းပါတယ်’’ဟု...
Market Place ဈေးဝယ်စင်တာ ပေါက်ကွဲမှု အလုပ်သမား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်က ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Market Place ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ ပထမထပ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူရှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။အဆိုပါဈေးဝယ်စင်တာ ပထမထပ်ရှိ Hong Bao Dimsum House က စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင် အပ်နှံဖို့အတွက် အလုပ်သမား ၁၃ ဦး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရာ Extension ကြိုးခွေအသုံးပြုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းကို အားသွင်းနေစဉ်မှာ မီးကြိုးခွေကနေ ၀ိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာကနေ စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေကို ပို့လွှ...
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမပေါ် ကမာရွတ်တီတီစီကျောင်းကိုလာရောက်တဲ့ ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်တွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်စည်းကမ်း မလိုက်နာရင် ဇွန်လ ၄ ရက်က စတင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ဆွဲကားတွေနဲ့ဆွဲပြီး အရေးယူသွားမယ်လို့ ဒီနေ့ထုတ် 7Day သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိပညာသင်နှစ်မှာ မာရွတ်တီတီစီကျောင်းဝင်းပတ်လည်မှာ School Ferry နဲ့ School Bus တွေရပ်နားဖို့နေရာတွေ သတ်မှတ်ထားပြီး ကျောင်းကြို၊ ပို့ အိမ်စီးယာဉ်တွေကို ရပ်တင်ချစနစ်နဲ့ပဲ ခွင့်ပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။‘‘မိဘတွေက ကားတွေနဲ့ လိုက်ပို့နေတာဖြစ်တြာေ...
အနည်းဆုံးလုပ်ခ ၄,၈၀၀ ကျပ် မပေး၍ စက်ရုံအချို့တိုင်ကြားခံရ
အနည်းဆုံးလုပ်ခ ကျပ် ၄,၈၀၀ မရခြင်းကြောင့် တိုင်ကြား ခံရသည့် စက်ရုံခြောက်ရုံရှိပြီး အ နည်းဆုံးလုပ်ခပေးရန် တောင်း ဆိုသည့် အလုပ်သမားအချို့ အ လုပ်ထုတ်ခံရမှုများရှိနေကြောင်း အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ကူညီပေးရေး (ဗဟို) ကော်မတီ တာဝန်ခံ ဦးနော်အောင် က ပြောသည်။စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မေလအတွက် လစာများထုတ်ပြီး နောက် အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း မရရှိခြင်း နှင့် လုပ်ခလစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ထွက်ပေါ်ခြင်းတို့ ကြောင့် အစိုးရက သုံးသပ်ဖြေ ရှင်းပေးရန် လိုသည်ဟု ဇွန်လ ၉ ရက်က လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှ...
လျာထားငွေတင်ပြအဆင့်တွင်ပင် ဝေဖန်ခံနေရသည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ကားဝယ်မည့်ကိစ္စကို ဝန်ကြီးချုပ်က မီဒီယာအချို့အား ဇွန်လ ၁၀ရက်၌ ရှင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။‘‘ကားစီးဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်’’ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများသုံးရန် ကားဝယ်ယူမည့်ကိစ္စသည် အဆောင်အယောင်ဥပဒေနှင့် လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့သည့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အဆောင်အယော...
ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ အား ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန် အစိုးရက မူအားဖြင့် ခွင့်ပြုထား ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် စတင်ကျင့်သုံးမည့်အ ချိန်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်မည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်သွင်က ပြောသည်။နေပြည်တော်၌ ဇွန်လ ၁၂ ရက်က ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကွန်ဖရင့်- ၂၀၁၈ တွင် ၎င်းက ထိုသို့ပြော ကြားခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံရုံးသစ်ကိုVantage Towel တွင်ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံရုံးသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း Vantage Towel ရှိ အဆိုပါသံရုံးသစ်နေရာ၌ ကျင်းပသည်။ သြစတြေးလျ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံရုံးကို ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်း၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သြစတြေးလျသံရုံးတွင် သြစတြေးလျ ကုန်သွယ် ရေးဌာန အပါအ၀င် Home Affairs ၊ Australian Federal Police ၊ Defence တို့ရှိကြသည်။ ၀န်ထမ်းအင်အား များပြားလာ၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနေရာ လိုအပ်လာသည့်အတွက် Vant...
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးပြပွဲ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တို့တွင် ကျင်းပမည်
မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်များ ပညာရေးလမ်းကြောင်း မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်စေရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်း များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အများပြည်သူ ကျယ်ပြန့်စွာ တိုက်ရိုက်သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပညာရေးပြပွဲ(၂၀၁၈)ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန Trade Training Institute (TTI) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ေ...
တာချီလိတ်နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှတဆင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်
နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့်နေရာများ၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များ၊ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ သိမြင်ခံစားနိုင်ရန် အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်ပေါက်များနှင့် နယ်စပ် ၀င်ပေါက်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အဆက် မပြတ် ၀င်ထွက်သွားလာ လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ဇွန် ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ တာချီလိတ် နယ်စပ်ဝင်၊ ထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ညအိပ်၊ နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ထို...
အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းများသည် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းမှစပြီးပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းက စတင်၍ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၃၂၂ ကျပ် ဝန်းကျင်အထိ ကျဆင်းခဲ့ရာမှ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်နှင့် ဧပြီလ အတွင်းတွင် တစ်ဒေါ်လာ လျှင်ငွေလဲနှုန်းအများစုမှာ ၁၃၂၇ကျပ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အများဆုံး၁၃၃၁ ကျပ်သာရှိခဲ့သည်။ မေလအတွင်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ငွေကျပ်၁၃၄၀ ကျော်အထိ ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဇွန်လလယ်တွင်ငွေကျပ် ၁၃၅၀ ကျော်အထိမြင့်တက်လာကာ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် တစ်ဒေါ်လာလျှင်...
စွန်ရဲအင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူနည်းပါလာသော်လည်း အလှဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူများပြား
၂၀၁၆ခုနှစ်ဇွန်လမှစကာ နာမည်ကြီးလာပြီး လူအများအပန်းဖြေသွားလာသည့်နေရာ တစ်ခုဖြစ်လာသည့်ကျောက်ဆည်ဒေသမှ စွန်ရဲအင်းသို့ယခုအခါ လာရောက်လည်ပတ်သူ နည်းပါးလျက်ရှိသည်။အပျော်လာရောက် လည်ပတ်သူနည်းပါးလာေ သ်ာလည်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အလှဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးသူများမှာ လာရောက်ရိုက်ကူးမှုများပြားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စွန်ရဲအင်းမှာ ယခင်ကဒေ သခံများ တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ အင်း၊ ကြာပန်းခူးကာ ကြာဝတ်ဆံထုတ်ယူကာရောင်းချရသည့် အင်းပင်ဖြစ်သည်။မူလကမန္တလေးမြို့ရှိ ဓာတ်ပုံအသင်းများက စွန်ရဲအင်းအလှဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်းပင်ဖြ...
မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာပြပွဲ ၂၀၁၈ ကျင်းပမည်
မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများနှင့် ဒေသအလိုက် လူကြိုက်များထင်ရှားသော ရိုးရာအစားအစာများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားများ ပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာပြပွဲ- ၂၀၁၈ (Myanmar Traditional Food Show 2018) ကို ပုဂံမြို့ရှိ လောကနန္ဒာဘုရားဈေးပွဲတော်တွင် သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ နှစ်ရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ပုဂံဒေသရှိ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုလေ့လာရင်း မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများကိုလာရောက်အားပေးသုံးဆောင်နိုင်ကြကြောင်း သိရသည်။ကြေးမုံသတင်းစာ (28-7-2018)
ရန်ကုန်မိုးပျံလမ်းကို အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့် တည်ဆောက်မည်မဟုတ်ဟု ဆို
ရန်ကုန်မိုးပျံအ မြန်လမ်းစီမံကိန်းတည်ဆောက် ရေး စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြကြောင်း လျှောက်ထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၅၀ ကျော်ရှိပြီး စီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာဖြင့် တည်ဆောက်မည်မဟုတ် ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်းက လွှတ်တော်သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြ သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးနေမျိုးထက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကားပိတ်ဆို့ကျပ်တည်းမှု လျော့ပါးစေရေးနှင့် ပြည်သူများ သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရေးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသည့် နှစ်ထပ်အမြန်လမ်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို...
4th Myanmar International Travel Mart, MITM 2018
မြန်မာနိူင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးနိူင်ငံတကာခရီးသွားပြပွဲကြီးကို သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့နဲ့ ၅ ရက်နေ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (၂) ရက်တွင် မနက် ၉:၀၀ နာရီကနေ ညနေ ၆:၀၀ နာရီအထိ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တွေ မျိုးစုံနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ Melia Hotel, Grand Ballroom မှာ ဆွေးနွေးခင်းကျင်းပြသလျက်ရှိပါသည်။ပြပွဲကို Union of Myanmar Travel Association (UMTA) မှ ဦးစီးကျင်းပပြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပို့ပေးထားပါသည်။ပြပွဲသို့ လာရောက် ကြည့်ရှုသူအားလုံးကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးစဉ်မျာ...
ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတက်ရန် နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များသို့ ဗဟိုဘဏ် ဒေါ်လာထုတ်ချေးမည်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနေ ဖြင့် ကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ပါက ပြင်ပမှ ဝယ်ယူရသည့် အခြေ အနေမျိုးကို ထိန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ဈေးကစားမှု များ လျော့နည်းမည်ဟု ဗဟို ဘဏ် အကြီးတန်းအရာရှိ တစ်ဦး က ဆိုသည်။‘‘ဗဟိုဘဏ်က ငွေထုတ်ချေး ရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒေါ်လာဈေး ကျလာမှာပဲ’’ဟု အငြိမ်းစားဗဟို ဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘောဇ ဘဏ် အကြီးတန်းအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသန်းလွင်ကပြောသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေထုတ်ချေးမည် ဆိုပါက လက်ရှိပြည်တွင်းငွေ ကြေးဈေးကွက်တွင် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် ကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုး မတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းနိုင်မည်ဟု ၎င်းကသုံးသပ်သည်။ပြည်တွင်...
ဓာတ်စာနှင့် ဖြည့်စွက်အစာများ တင်သွင်းခွင့်ရရန် ထုတ်ပေးသည့်ထောက်ခံချက်ကို အလွဲသုံးစားဖော်ပြကြော်ငြာပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် အရေးယူမည်ဟု ဒေါက်တာမင်းဝန်က ပြောသည်။ ‘‘FDA က ထုတ်ပေးတဲ့ သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်နဲ့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်တွေကို FDA မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် မကြော်ငြာပါနဲ့လို့ သတိပေးထားတာပါ’’ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(FDA)ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံ ဒေါက်တာမင်းဝန်က ပြောသည်။ ဓာတ်စာနှင့် ဖြည့်စွက်စာများသည် ကျန်...